Cunnooyinka Ku Habboon Bukaanada Karantiimada Ku Jira | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — April 16, 2020
Hey’adda caafimaadka Adduunka ayaa soo saartay ama shaacisay hannaanka cusub ee cunitaanka caafimaadka leh, kaas oo loogu talagalay bukaanada qaba ama looga shakiyay cudurka safmarka ah ee karoona 19, kuwaas oo kujira xaaladda karantiimada.
Ujeedka looga gol-leeyahayna waa in la’adkeeyo ama kor looqaado difaaca jirka aadanaha. Cunno waliba oo difaaca kor uqaadeyso waxa ay ufiicantahay caafimaadkeenna.
Maxaan Qaataa ama Aan Cunaa Waqtiga Karantiimada?
Marka hore cab biyo badan: biyaha waxa ey naga caawinayaan in jirkeennu uu noqdo mid qoyan(Hydrate), taas oo kaqeyb qaadaneysa yaraynta heerkulka jirkeenna. Intabadan calaamadaha cudurkaan waxaa kamid ah qandho, qof waliba oo qandho ama xumad ey haysaana waxaa looga baahanyahay in uu cabo biya kabadan inti uu horay uqaadan jiray.
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego khubarada Barnaamijka Cuntada Adduunka (WFP), waxa ey leeyihiin markii la arko inuunan qofku fir-fircoonayn , waxaa yar in uu qofku harraad dareemo, taasi waa sababta koowaad ee qofka loogu boorinaayo in uu biyo badan cabbo. Waxaana lagula taliyaa qofka in biyiha uu ku rito jeex liin dhanaan ah.
Ku dadaal Cunidda Fitamiin Siiga (Vitamin C): Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in fiitamiin C-gu (Liinta waxaa laga helaa Fitamiin Sii) uu aad ugu fiicanyahay cudurkaan safmarka ah ee Karoona 19, ama aadba aragtay dad leh waan isku daaweynay oon ku reysannay.
In kasta oo dhakhaatiirta iyo cilmi-baarayaashu ay daraasad ku sameynayeen saameynta heerka fitamiin sii-ga uu uga hortagi karo cudurka cusub ee coronavirus, illaa iyo haddana cilmibaarayaashu ma’aysan shaacin in ey kahortagi karaan cudurka Karoonaha. Balse waxaa la’isku raacay in ey soo fiicnaatay xaaladda dhowr bukaan oo lagu muday Fitamiin Siiga, waxaana laxaqiijiyay in ey awood uyeesheen neefsiga, kaas oo markii horeba ku’adkaa.
Cunno Dheelitiran: Si fudud haddii loo dhigo, ma jiraan wax cunno ah ama kaabis ah oo ‘kobcin kara’ habka jirkeena u difaaco ama uu kaga hortagi karo COVID-19. Si kastaba ha noqotee, cunista cunno si wanaagsan isugu dheelitiran, oo leh miro iyo qudrad fara badan, badar culus (Carbohydrates), borotiinno iyo dufan caafimaad leh intaba waa habka ugu wanaagsan ee lagu helo dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah caafimaadka iyo shaqada ka hortagga cudurada caadi ahaan usooweerara jirkeenna.
Maadaama aan karantiimo kujirno waxaa yaraanaya dhaq-dhaqaaqeenna, taasi waxa ey nagu qasbeysaa in aan kafogaanno cunidda duxda badan iyo badarka caadiga ah (Carbohydrates) waxaa kadhasha cayil.
Joogteey Cunnada Simaalinle ah: Haddii aan cunno waqtiyo aan isku mid ahayn waxaa kadhasha caafimaad darro, tusaale haddii aan maantay quraacanno balse aanan qadayn sidookalena aanan cunin wax casho ah maxaa kadhalan kara?
Qubarada caafimaadka waxa ey kutalinayaan in aan joogteenno oo aan ilaalino waqtiyada cunnada,Taasi waxay naga caawin kartaa inaan ilaalinno nafaqada uu jirkeennu ubbaahanyahay.
F.G: Haddii uu isdhimo difaaca jirkeenna waxa ey fursad siineysaa in cudur waliba aan unuglaanno.
Tags: Cunnooyinka u Habboon Bukaanka Karantiimada Kujira?
Next post The Pursuit of Happyness - Waa Filim Laga Sameeyey ama Jilay Qiso Dhab ah
Previous post Hilibsiga Xoolaha iyo Qalashada Dadka